Dowladda Soomaaliya oo taageertay xil ka qaadista madaxweynaha maamul goboleedka Hir-Shabeelle - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo taageertay xil ka qaadista madaxweynaha maamul goboleedka Hir-Shabeelle
August 20, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid oo loo yaqaan Juxa. [Xigashada Sawirka: Facebook]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa taageertay xil ka qaadista madaxweynaha maamul goboleedka Hir-Shabeelle.
Bayaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha maanta oo Axad ah lagu sheegay in dowladdu ay tixgelinayso go’aanka ay baarlamaanku xilka uga qaadeen madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sidoo kale bayaanka ku sheegtay in 30 beri gudahood lagu qabto doorashada Madaxweynaha hir-Shabeelle.
Abuucii hore, baarlamaanka maamulka Hir-shabeelle ayaa ceyriyay madaxweynahoodii Cali Cabdullaahi Cosoble, iyaga oo ku eedeeyay waxqabad xumo mudadii uu xafiiska joogay.
Cosoble ayaa go’aanka baarlamaanka ku tilmaamay mid sharci daro ah, isaga oo ku adkaysanaya in uu yahay Madaxweynaha Hir-shabeelle.
November 2, 2017 Ciidamada Itoobiya oo ku soo noqday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
Jowhar-(Puntland Mirror) Labo xildhibaan oo katirsan maamul goboleedka Hir-Shabelle iyo ilaaladoodii ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah meel u dhow caasimada Soomaaliya ee Muqdisho shalay oo Talaado ahayd. Xildhibaanada ayaa saarnaa gaari yar oo uu [...]